Kooxda 'Irrico Group' inay soo saarto baradhada shukulaatada Laydhka - PotatoSystem
Kooxda 'Irrico Group' inay soo saarto baradhada loo yaqaan 'chips' Lay's chips
Shirkadda Irrico Group ee Shirkadaha (qayb ka mid ah VTB Group) waxay qandaraas la gashay shirkadda Frito Lay Production LLC (qayb ka mid ah PepsiCo) ee loogu talagalay in la siiyo baradhada Stavropol ee loogu talagalay diyaarinta chipsyada Lay.
Irrico waxay beeraysaa baradhada iyadoo la adeegsanayo tikniyoolajiyad casri ah, tikniyo baradhada oo ku habboon astaamaha gobolka lana kulmay heerarka caalamiga ah. Isticmaalka nidaamka waraabka casriga ah waxay kuu oggolaaneysaa inaad hesho miro tayo leh oo ku taal koonfurta Ruushka, oo ku taal Tervropol Territory, xagaaga. Keenista baradhada hore waxay bilaaban doontaa dhamaadka bisha June ee sanadkan. Bakhaar qudaar oo casri ah oo casri ah oo ay weheliso shaqaale aqoon sare leh ayaa suurta gal ka dhigaya in la hubiyo in muddo dheer la keydiyo barandhada xilliga guga jiilaalka iyo in la keeno illaa dhamaadka bisha Juun ee sanadka soo socda.
Noocyada qaarka ah ee loo yaqaan 'Chie' noocyo kala duwan oo ka mid ah googo 'ayaa noo soo koray iyada oo la raacayo heerarka tayada leh ee PepsiCo. Farsamooyinkeena casriga ah ee teknoolojiyadda iyo nidaam waraab oo casri ah ayaa suuragal ka dhigaya inay bilaabaan dhoofinta horaanta bisha Juun, taasoo aad uga horreysa waqtiga goosashada soo saareyaasha wax soo saarka beeraha ee ka imanaya bartamaha Ruushka, ”ayay tiri Victoria Askhabalieva, Agaasimaha Ganacsiga ee Shirkadaha Shirkadaha Irrico.
Alexander Kostikov, oo ah Agaasimaha Isgaarsiinta ee PepsiCo ee Russia: “Dhamaan chips-yada Laydh ee aan ku iibinno Ruushka waxaa laga sameeyay kaliya baradhada lagu beero Ruushka. Chips noocyo gaar ah oo baradho ah ayaa loo baahan yahay, iyada oo aan dalabyo aad u sarreeya labadaba ka qaadno tayada baradhada iyo mabaadii'da shaqada ee adeeggeena beeraleyda. Ka mid noqoshada alaabada baradhada Lay ee barkadda waa nooc “sumad tayo leh” oo beeraleyda ah, taasoo cadeynaysa u hoggaansanaanta heerarka wax soo saarka adduunka. ”
PepsiCo waa processor-ka baradhada ugu weyn warshadaha Ruushka. Sannad kasta, shirkaddu waxay ka iibsataa in ka badan 350 kun oo tan oo baradho ah alaabada iibiyaasha deegaanka. Si gabi ahaanba loo helo saldhigga ceyriinka ee Ruushka, sanadkii 1996 shirkaddu waxay billawday barnaamij ay ku taageerayso alaabada baradhada. Iyada oo qayb ka ah barnaamijka, beeraha baradhada waxaa la siiyaa qalab wax lagu beero oo tayo sare leh, iyo beeraleydu waxay helayaan caawimaad joogto ah iyo talo khubaro, kaqeybgal aqoon isweydaarsiga si ay is dhaafsadaan khibradaha. Thanks to barnaamijka, PepsiCo wuxuu awood u yeeshay inuu si buuxda isugu keeno qalab tayo leh oo tayo sare leh mugga loo baahan yahay ilaa maanta.
Sannadkan, Irrico waxay qorsheyneysaa in ay aruuriso in ka badan 50 kun oo tan oo baradho ah, kuwaas oo saddex meelood meel loo qaybin doono dhowr wershadood oo waaweyn oo ay ka mid yihiin shirkadaha caalamiga ah iyo kuwa maxalliga ah ee soo saaraya chips, faransiiska, khudradda baradhada, istaarijka iyo dalaga.
Tags: processing baradhochips wax soo saarkagobolka Stavropol